▷ Hadda Toos u ah: Heshiisyada Dyson ee Cyber ​​​​Isniinta, Soo hel faaruqyada Iibka ugu Wanaagsan iyo duubabka hawada - 【Isbarbardhigga】 2022
Hadda Nool: Heshiisyada Dyson ee Cyber ​​​​Isniinta, Soo hel faaruqinta Iibinta ugu Wanaagsan iyo duubabka hawada
Cod ku raadi - Si dhakhso leh oo fudud u hel waxa aad rabto inaad daawato adoo adeegsanaya cod raadinta.
2021-11-29T01: 49: 31.446Z
Oh, cimilada dibadda waa mid aad u xun, laakiin nadiifiyaha hawada kulul aad buu u macaan yahay...
Si ka duwan meelaha timaha lagu qurxiyo iyo nadiifiyeyaasha faakuumka, taageerayaasha Dyson kuma dhammaanayaan ilbiriqsiyo gudahood waxaana jira kayd aad u cajiib ah oo la samaynayo. Gudaha Mareykanka, Amazon waa doorashadaada ugu fiican, halka aad awoodid Ku xidh Dyson Pure Hot + Cool Link HP02 oo hawo nadiifiye ah oo la cusboonaysiiyay € 449.99 (€ 147.64 qiimo dhimis lagu sameeyay mid cusub).
Boqortooyada Ingiriiska, Donaghy Bros waxay haysataa kuleyliyaha taageere ee Dyson HP07 Hot + Cool oo ah € 528. Looma calaamadin inuu yahay heshiis Cyber ​​​​Isniin ah, laakiin waa € 31 ka jaban meel kasta oo kale markaa waan tirin doonaa.
2021-11-29T01: 33: 40.974Z
(Sumcada sawirka: Dyson)
Caadi ahaan waxaan u maleynayaa Newegg inay tahay meel laga helo RAM raqiis ah ama kumbuyuutarka ciyaarta, laakiin waxaa soo baxday inay sidoo kale tahay meel aad u fiican oo laga helo qaabeeyaha Dyson Airwrap. Sida aan macquul ahayn sida ay u egtahay Waxay haysaa xirmo dhammaystiran oo Airwrap ah oo la cusboonaysiiyay hadda oo dhan € 399.99 (€ 100 qiimo dhimis ah qiimaha iibka).
Newegg waxa uu iibsadaa ku kooban shan macaamiil (taasi dhib ma laha ilaa aad haysato laba kun oo doolar oo aad ku kharash garayso goobaha timaha lagu qurxiyo), taas oo noqon karta sababta ay weli qaar u harsan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, ma garanayno inta ay diyaar yihiin.
2021-11-29T00: 57: 52.603Z
Ma doonaysaa in Dyson V11 uu gurigaaga ka dhigo mid aan wasakh lahayn ka hor inta aanay waalidku iman kirismaska? Waxay ka duulayaan khaanadaha Best Buy iyo Walmart, kuwaas oo si dhab ah uga baxay kaydka, laakiin wali waa jiraan. noocyo badan oo V11 ah oo diyaar ah oo sugaya Amazon Gudaha U.S.
Doorashada ugu jaban ee Maraykanka waa Xayawaanka Dyson V11 oo dib loo hagaajiyay qiimihiisu yahay €574 (mid cusub ayaa kugu kici doona € 599.99 meel kale).
Gudaha UK qiimaha ugu fiican ee aan helay waa Dyson V11 Absolute ah oo loogu talagalay € 439 ee Currys, kaas oo € 160 ka yar qiimihiisii ​​hore aadna uga wanaagsan wax kasta oo Amazon ay bixiso xilligan.
2021-11-28T13: 25: 05.306Z
haye! Ku Soo Dhawoow LaComparacion's Cyber ​​​​Isniinta Dyson Deals Blog Live! Qalabka Dyson waxay caddeeyeen inay aad caan u yihiin jimcaha madow iyo sabtida, iyo qaar badan oo ka mid ah meelaha ugu caansan ee faaruqinta iyo goobaha timaha ayaa hadda ku jira kayd xaddidan, laakiin ha welwelin, waxaan raadin doonaa heshiisyada ugu fiican ilaa hadda. , markaas ma samaynaysid. in la sameeyo.
Aan ku bilowno duubka hawada ee Dyson. Sida sannadkii hore, ma aanan arag wax qiimo dhimis ah alaabtan, taas oo aan la yaab lahayn marka loo eego caannimada qosolka ah ee qiimaha buuxa. Dhab ahaantii, inta badan tafaariiqda hadda gebi ahaanba way ka baxeen kaydka, laakiin haddii ay ku jirto liiskaaga rabitaanada (ama raadinta mid ka mid ah hadiyadda kirismaska ​​​​qofka nasiibka leh ee la jecel yahay), weli waxaa jira dhowr doorasho.
Dyson lafteedu gabi ahaanba way ka dhamaatay Maraykanka iyo UK, laakiin waxa jira doorashooyin kale. Haddii aad ku sugan tahay Maraykanka doorashadaada ugu fiican ayaa ah Nordstrom Rack, halkaas oo aad ka iibsan karto Dyson Airwrap oo la dayactiray $ 429.97. Kani waa qiimihii ugu hooseeyay ee aan aragnay inta lagu gudajiray Jimcaha Madoow / Cyber ​​​​Isniinta sabtida.
Gudaha Boqortooyada Midowday (UK), Boots ayaa la soo gurmaday Dyson Airwrap Styler Complete wali waa la heli karaa € 449.99. Waxa kale oo aad heli doontaa 1798 dhibcood kaarka Advantage, oo ku siinaya € 17.98 si aad u isticmaasho wakhtiga xigta ee aad wax soo iibsanayso. Waxaa jira dalabyo cunto oo badan!